Cala Moraig, rimwe remabhichi akanaka kwazvo kuCosta Blanca | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | España, Beaches
Cala Moraig ndeimwe yemahombekombe akanaka kwazvo mu Costa blanca. Inowanikwa mudunhu reAlicante Marina Alta uye, zvakanyanya, mu Poble Nou de Benitachell, pakati nepakati peJávea neMoraira.
Ichi chidiki chidiki chejecha jena uye kristaro yakajeka mvura inoonekwa kuseri kwechisimba Puig de la Llorença massif, iyo inowira pamahombekombe ichigadzira inoshamisa mawere anosvika zana metres pakakwirira pakati payo pane, chaizvo, madiki mahombekombe. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Cala Moraig, tinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Zvinhu zvekuita muCala Moraig
2 Ungasvika sei kuCala Moraig
3 Izvo zvakapoteredzwa neCala Moraig
Zvinhu zvekuita muCala Moraig
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva nezve Cala Moraig ndechekuti kona yekona yekuruboshwe itsika yenudist. Asi, zvinonyanya kukosha ndizvo zvinhu zvaunogona kuita kana iwe ukashanyira iri rakanaka gungwa.
Nzvimbo yacho yakakwana kuti iwe udzidzise kudhizaina uye snorkeling. Mawere chaiwo anowira pamhenderekedzo yegungwa anoumba matombo asinganzwisisike mumvura munogara marudzi akasiyana.
Pakati penzvimbo dzine matombo, chinokwezva chikuru cheCala Moraig chakamira. Zviri nezve kufona Cova dels Arcs, iyo ine maburi mukati uye pasi pemvura. Icho chaive chigadzirwa chekarst drainage system yakaitwa negungwa padombo uye chikamu chakanaka chayo chakanyudzwa makore angangoita mabhiriyoni matanhatu apfuura.
Zvinozivikanwa kuti zvaizivikanwa nevanhu kubva pakagara vagari vekutanga munzvimbo iyi. Gare gare, yakashanda seutiziro hwevafambisi vengarava, kunyangwe yaizowanikwa zvakare pakugadzirira mabasa emugwagwa unobatanidza Poble Nou de Benitachell pamwe nemaguta enzvimbo iyi.
Kunze kweiyo Cova dels Arcs inokupa iwe anoshamisa ekuvira kwezuva maposikadhi. Uye, mukati, chikamu chinozivikanwa chebako chinonzi Vanonyudza mukamuri, inonziwo "Star Window." Kubva ipapo, iwe unogona zvakare kuwana wakapamhama epazasi makamuri ayo anotaurirana zvakananga negungwa rakavhurika.
Zvisinei, usati wapinda mubako unofanira kutora matanho. Chekutanga pane zvese, haufanire kuzviita kana masaisai akwira uye gungwa richitenderera nekuti zvinogona kukonzera kuti urove matombo. Zvakare uye chechipiri, pamusoro pegomba panotsvedza uye hakuna kunetsa kudonha. Asi, mune chero mamiriro ezvinhu, iri zvisikwa zvinoshamisa iyo inoonekwawo seyakarebesa mvura yepasi pegungwa muSpain yese.
Kune rimwe divi, kubva kuCala Moraig kune nzira dzinoverengeka dzekufamba nemabhasikoro dzinopfuura nepakati pezvakataurwa pamusoro pePuig de la Llorença, inonzi zvakare Cumbre del Sol. Mira pakati pavo iyo inobatanidza Abiar naCalistros, iyo inomhanya nemumatope ekurima wemizambiringa uye inokuratidza zvivakwa zvechivanhu zvedunhu rakadaidzwa riurau, kwaichengeterwa mazambiringa. Zvinopera munzvimbo yekuvaraidza yeguta rekutanga ratataura.
Pamwe neiyi nzira, iyo iwe yaunogona kuita zvese netsoka uye nebhasikoro, iwe unayo iyo yePenya-Segats, uyo anonyanya kukwezva aripo mumaonero aanokupa emapako ari pamhenderekedzo. Uye zvakaenzana, iyo yekukanganisa kweMoraig, iyo ine kukosha kwakanyanya kweiyo geological. Asi iyo nzira iyo inokushamisa iwe zvakanyanya ndeye kufona Mawere Mawere, iyo inotevera iyo SL-CV 50 nzira, yakatarwa uye ine akawanda maonero.
Ungasvika sei kuCala Moraig
Nzira chete yekuenda kuCala Moraig ndeye mugwagwa. Iwe unofanirwa kuenda kune iyo CV-737 uye tora nzira inoenda kune Cumbre del Sol kuguta. Mushure mekupfuura izvi, iwe unowana yekupaka nzvimbo yekumusoro chikamu checove kwaunofanirwa kupaka mota yako woita imwe nzira munzira netsoka. Izvi hazvina kureba, kunyangwe zvichitaurwa.
Izvo zvakapoteredzwa neCala Moraig
Kune rimwe divi, mushure mezuva pamahombekombe muCala Moraig, iwe zvakare uchazoda kuziva nharaunda. Iyo Marina Alta Alicante ine mamwe maguta akanaka kwazvo akakosha kushanya kwako. Tiri kuzokuratidza iri padyo neiyo cove.
Chinhu chekutanga chatinofanira kukuudza nezve ino taundi ndechekuti, munzvimbo yayo yemasipareti, une mamwe makoji akanaka senge kubva kumaTestos y by Llebeig. Asi zvakare inokupa iwe inonakidza mamaki. Pakati peizvi, iyo chechi yeSanta Maria Magdalena, Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX mune baroque maitiro. Uye zvakare, tinokukurudzira kuti uone iyo Jaime Llobell Oratory, Yakavakwa muXIX.
Kubva panguva imwechete iyo iyo Town Hall uye mukuru kwazvo iyo Portalet, iro raive rimwe remasuwo erusvingo rwekare uye nhasi rinopa mukana wechechi.
Pedyo zvikuru neCala Moraig zvakare iri taundi diki rine vagari vanosvika chiuru nemazana matanhatu rine chiteshi chengarava chakaisvonaka. Nezve zvivakwa zvayo, iyo castle, iyo yaive yemahombekombe ekutarisa kwemahombekombe kuchengetedza nzvimbo kubva pakurwiswa nepirate.
Iri taundi diki nderimwe rinokurudzirwa zvakanyanya muchikamu chino cheruwa rweAlicante. Iwe unozoshamiswa nehuwandu hwezvivakwa zvahwo. Pakati pavo, seti ye manor dzimba nedzimba dzoushe iyo inoshanda sehofisi kumahofisi eYunivhesiti yeAlicante.
Ivo zvakare vanosimbisa iyo musangano wemadzibaba eFranciscan, kubvira muna 1645; iyo Torres-Orduña Muzinda, nhasi imba yetsika; iyo Neo-Gothic chechi yeiyo Yakachena Conception uye, pamusoro pezvose, iyo Slice, yakanyorwa muzana ramakore rechi XNUMX uye rinova chivakwa chekaresa mutaundi.
Iri ndiro guta rinonyanya kukosha munzvimbo iyi uye rakachengetedzwa ne Montgó massif, kutenderedza paunenge uine pakaisvonaka musango paka. Mune yekupedzisira, unogona kusvika padhuze neiyo Cape San Antonio, iyo, ine mawere ayo anoyevedza, inokupa iwe maonero akanaka eCosta Blanca.
Nezve zviyeuchidzo zveJávea, zvinomira kupfuura zvese chechi yeSan Bartolomé, yakavakwa muzana ramakore rechi 1931. Inobatanidza hunhu hwenhare nekuda kwehurongwa hwayo hwemakona uye mabhureki ayo akasimba nehunhu hwekunamata kwetembere. Uye zvakare, iyo bhero shongwe inoonekwa kubva kunzvimbo zhinji mudunhu. Kubva XNUMX iri National Artistic Monument.
Iyo chechi yeMukadzi wedu weLoreto, iri muchiteshi uye iyo padenga rayo inofanidza keel yechikepe. Kune rimwe divi, kana iwe ukaenda kuCape San Antonio, iwe unowana iyo yemamongi yeMhandara yeNgirozi uye akati wandei shongwe dzekutarisa izvo zvakadzora kusvika kwevapambi.
Mukupedzisa, Cala Moraig Ndiyo imwe yemahombekombe akanaka kwazvo kuCosta Blanca yese. Iyo inokupa iwe zvishamiso senge iyo Cova dels Arcs. Asi zvakare mataundi ari munharaunda akakodzera kushanya kwako. Haudi here kuziva ino kona ye Dunhu reAlicante?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Cala Moraig